Madaxweyne Xasan oo Cumar C/rashiid u magacaabay RW Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Cumar C/rashiid Cali Sharmarke u magacaabay Ra’iisul wasaaraha cusub ee dalka, kaddib markii 6-dii bishan ay baarlamaanka codka kalsoonida ah kala laabteen xukuumaddii Ra’iiusul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed.
Munaasabad lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Qaranka oo ay ka qeyb galeen Xildhibaanno iyo Mas’uuliyiin kale ayuu Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa uu Ra’iisul wasaaraha dalka u magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali.
Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha xilkan adag ee uu u magacaabay, waxaana uu balan qaaday in uu wax badan qaban doono, isla markaana uu dalka gaarsiin doono inay ka dhacdo doorasho xor ah, marka la gaaro sanadka 2016-ka.
Ra’iisul wasaaraha cusub oo 54 jir ah ayaa dhashay 19-kii June ee sanadkii 1960, waxaana 13-kii February sanadkii 2009-ka loo magacaabay in uu noqdo Ra’iisul wasaaraha KMG ah ee dowladdii uu Madaxweynaha ka ahaa mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Cumar C/rashiid ayaa haatan ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka, waxaana sida ay sheegayaan ilo dublamaasiyadeed lagu magacaabay talobixin ka timdi Mareyanka.